Vaovao - nandrisika hanondrotra ny varotra fiara mba hanefana ny fiatraikan'ny COVID-19 eo amin'ny tsena fiara eo an-toerana.
Shanghai (Gasgoo) - Yiwu, ekena ho tsena fivarotana kojakoja lehibe indrindra eto an-tany, dia nanentana hampiakatra ny varotra fiara mba hanimbana ny fiatraikan'ny COVID-19 amin'ny tsena fiara eo an-toerana.
Arakaraky ny maha lafo ny fiara no mahabe vola ny mpividy. Ireo mpanjifa izay mividy fiara mitentina ambany RMB10,000 (ao anatin'izany ny VAT) dia omena vola fanampiana RMB3,000 isaky ny fiara. Famindram-bola mitovy amin'ny RMB5,000 dia mihatra amin'ny fiara mitentina RMB100,000 na eo anelanelan'ny RMB100,000 sy 300,000. Ankoatr'izay, ny famporisihana ho an'ny vondrona dia ho avo roa heny ho RMB10,000 ho an'ny vokatra izay ny vidiny dia mitentina RMB300,000 na eo anelanelan'ny RMB300,000 ka hatramin'ny 500,000, ary hatramin'ny RMB20,000 ho an'ireo manana vidiny na mihoatra ny RMB500,000.
Hamoaka lisitra fotsy an'ny orinasam-pivarotana fiara eo an-toerana ny governemanta. Ny vanim-potoana manan-kery ho an'ny politika dia haharitra hatramin'ny famoahana ny lisitra fotsy hatramin'ny 30 Jona 2020.
Ireo mpanjifa tsirairay na orinasa mividy fiara vaovao avy amin'ireo mpivarotra ao amin'ilay lisitra fotsy voalaza etsy ambony sy mandoa hetra mividy fiara ao Yiwu dia afaka manome isa ireo fanampiana rehefa nankatoavin'ny manampahefana voakasik'izany ny fangatahan'izy ireo.
Ankoatra ny angon-drakitra momba ny lany andro, ny governemanta koa dia mametraka fetra mihoatra ny isan'ireo fiara mihatra amin'ilay fitaomana. Quota 10 000 unit no havoaka voalohany amin'izay hanentanana ny mpanjifa hividy fiara faran'izay haingana.
Ny varotra fiara an-tsokosin'i China dia nisondrotra 4,4% isan-taona ka hatramin'ny 2,177 tapitrisa isam-bolana tamin'ny volana aprily, fa ny varotra PV kosa mbola nihena 2,6%, hoy ny Fikambanan'ny mpanamboatra fiara (CAAM) any China. Mety hampiharihary fa ny fitakiana ny fanjifana fiara tsy miankina dia mila havoaka ary hohamafisina.
Mba hamelomana indray ny varotra fiara voadona mafy tamin'ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, tanàna maromaro tany Sina no nanakodia ny fepetra isan-karazany, ka anisan'izany ny manolotra fanampiana. Tsy i Yiwu no voalohany, ary azo antoka fa tsy ho ilay farany.